अमेरिका समालिएर बोलोस् : चीन , प्रतिबन्ध लगाएमा व्यापार वार्ता रद्द हुने चेतावनी – Rajdhani Daily
एजेन्सी / बेइजिङ
सिंगापुरमा भएको क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलनमा अमेरिकी रक्षामन्त्री जेम्स माटिसले दक्षिण चीन सागरमा चिनियाँ सैनिकको उपस्थितिलाई लिएर दिएको अभिव्यक्तिले चीन आक्रोशित भएको छ । अमेरिकी रक्षामन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर दुई देशबीच तनावको अवस्था सिर्जना भएको हो । जेम्स माटिसले दक्षिण चीन सागरमा आफ्ना सैनिक उपस्थित गराएर चीनले छिमेकी देशहरूलाई तर्साइरहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । चीनले माटिसको भनाइ गैरजिम्मेवार भएको टिप्पणी पनि गरेको छ । चीनका लेफिटनेन्ट जनरल हि लीले पत्रकार सम्मेलनमा चीनलाई जुनसुकै अवस्थामा पनि आफ्नो इलाकामा सैनिक र हतियार तैनाथ गर्ने अधिकार भएको स्पष्ट पारे ।
हि लीले पनि यो अभिव्यक्ति सिंगापुरमा भएको क्षेत्रीय सुरक्षा सम्मेलनमा नै दिएका हुन् । उनले दक्षिण चीन सागरमा सेनाको तैनाथी चीनको राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको हिस्सा भएको पनि
उल्लेख गरे । लेफ्टिनेन्ट जनरल हि लीले भने, ‘यहाँ हतियार तैनाथ गर्नुको उद्देश्य अरू कसैले पनि चिनियाँ भूभाग कब्जा नगरोस् भन्ने हो । हाम्रो इलाकामा हामी हतियार र सेना तैनाथ गर्न सक्छौं । कुनै अन्य देशले यस विषयमा कुरा उठाउँछ भने त्यो हाम्रो आन्तरिक मामलामाथिको हस्तक्षेप हो, यसलाई हामी स्वीकार गर्दैनौं ।’
यस्तै, अमेरिकाका लेफ्टिनेन्ट जनरल ज्वाइन्ट स्टाफ निर्देशक केनेथ मेकेन्जीले अमेरिकी सेनाले कृत्रिम टापुलाई नष्ट गर्न सक्छ भन्ने प्रश्नको जवाफमा अमेरिकासँग पश्चिमी प्रशान्त महासागरमा साना साना टापु नष्ट गरेको अनुभव रहेको र यस्तो गर्नु अमेरिकी सेनाको मूल दक्षताभित्र पर्ने उल्लेख गरे । उनले दोस्रो विश्वयुद्धमा यस्तै साना टापु नष्ट गरेको उदाहरण दिए ।
उनले आफ्नो भनाइलाई ऐतिहासिक तथ्य दोहो¥याउनुभन्दा अर्को कुनै उद्देश्य नरहेको बताए । चीनको सरकारी पत्रिका ग्लोबल टाइम्सले आफ्नो सम्पादकीयमा उनको नियत जे भए पनि मिडिया रिपोर्टले धम्की दिएको आभास भएको उल्लेख गरेको छ ।
ग्लोबल टाइम्सले लेखेको छ, ‘स्पष्ट रूपमा अमेरिकासँग यस्तो क्षमता छ तर केही पटक यो विषय दोहो¥याउनु राजनीतिक उक्साहट मान्न सकिन्छ । मेकेन्जीले पनि आफ्नो सैन्य शिक्षाका क्रममा यो सिकेको हुनुपर्छ ।’ ग्लोबल टाइम्सले अघि भनेको छ, ‘वास्तवमा चिनियाँ जनमुक्ति सेनासँग चीनका टापुमाथि हुने कुनै पनि हमलाको स्रोत नष्ट गर्ने क्षमता छ, जसमा सैन्य अड्डासमेत पर्छन् र सहायक समुद्री प्लेटफर्मसमेत पर्छन् । यो चिनियाँ सेनाको दक्षता हो ।’
पत्रिकाले भनेको छ, ‘तर चीनको रक्षा मन्त्रालय या सेनाका अधिकारीले कहिल्यै पनि अमेरिकी सेनालाई जोड दिएर यस्ता अभिव्यक्ति दिएको छैन । प्रस्ट रूपमा चीनको सेना बढी संयमित रहेको छ ।’
चीन सरकारको आधिकारिक धाराणा आउने सो पत्रिकाले प्रश्न गरेको छ, ‘चिनियाँ टापुलाई नष्ट गर्नुको मतलब के हो ? के यो चीनविरुद्ध युद्धको घोषणा हो ? हामीलाई अमेरिकी सरकारले एउटा परमाणु हतियार सम्पन्न देशकाविरुद्ध यस्तो मुर्खतापूर्ण प्रयास गर्छ जस्तो लाग्दैन । तर, अमेरिकाको सरकारको तुलनामा केही ज्यादा डिङ हाक्ने
गरेको छ ।’ चीनले अमेरिकी जनरललाई अमेरिकी मिडियाको प्रभावमा परेर उत्तेजक बयानबाजी नदिन पनि सल्लाह दिएको छ । चीनले नानसा द्वीपमाथि निर्माण कार्य आफ्नो सम्प्रभुताको विषय भएको भन्दै यहाँ रक्षात्मक हतियार तैनाथ गर्नु रुख रोप्नुजस्तै भएको स्पष्ट पारेको छ ।
चीनले यो क्षेत्रमा कुनै पनि देशभन्दा बढी सैन्य उपस्थिति अमेरिकाको भएको भन्दै यसका बाबजुद पनि चीनमाथि सैन्यकरणको आरोप लगाएको बताएको छ । दक्षिण चीन सागरमा महŒवपूर्ण समुद्री मार्ग हो । जहाँ चीनसहित विभिन्न ६ वटा देशले दाबी पेस गर्दै आएका छन् । सो क्षेत्रमा चीनले साना साना टापु निर्माण गरिरहेको छ । विस्तारै आफ्ना सैनिकको उपस्थिति बलियो बनाएको चीनले गत महिना मात्रै पनि कृत्रिम द्वीपमा बमबर्सक विमान उतारेको बताएको थियो ।
व्यापार वार्ता रद्द हुने चेतावनी
यसैबीच, अमेरिकाले व्यापार प्रतिबन्धहरू लगाएमा चीन र अमेरिकाबीच हालसम्म भएको व्यापारसम्बन्धी सबै वार्ता रद्द हुने चेतावनी दिएको छ । चिनियाँ उपप्रधानमन्त्री लिउ ही र अमेरिकी वाणिज्यमन्त्री विल्बर रोसबीच भएको छलफलपछि चीनले अन्य देशबाट गरिने आयात बढाउन आफू तयार भएको बताएको थियो ।
चिनियाँ उत्पादनमाथि ५० अर्ब डलरबराबरको थप आयात कर लगाउने अमेरिकी धम्कीको केही दिनपछि नै अमेरिकी वाणिज्य मन्त्री चीन आएका हुन् । अमेरिकी उत्पादन तथा सेवा खरिद बढाउनेबारे गत मेमा भएको वासिंगटनमा भएको सम्झौताबारे पनि आइतबार जारी विज्ञप्तिमा संकेत गरिएको छ । विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘वासिंगटनमा भएको सहमति कार्यान्वयन गराउन दुवै पक्षले कृषि तथा ऊर्जालगायतका विभिन्न क्षेत्रसम्बन्धी राम्रोसँग कुराकानी गरे अनि सकारात्मक तथा ठोस प्रगति हासिल गरेका छन् र सम्बन्धित विवरणहरू दुवै पक्षबाट पुष्टि हुन बाँकी नै छ ।’ बेइजिङमा भएको वार्ता अमेरिका र चीनबीचको द्विपक्षीय व्यापार घाटा कम गर्ने विषयमा लक्षित थियो । अमेरिकाले हाल चीनलाई बेचिरहेको भन्दै चार गुणा बढी आयात गर्ने गरेको छ । ‘असमान’ व्यापारलाई लक्षित गर्दै गत सातामात्रै ह्वाइट हाउसले अमेरिकाले ५० अर्ब डलरबराबरको चिनियाँ सामग्रीमाथि २५ प्रतिशत आयात शुल्क लगाउने जनाएको थियो ।
जी–७ का अर्थमन्त्रीद्वारा चीनको चर्को आलोचना
ओटावा / एजेन्सी– स्टिल र आलमुनियममा कर लगाउने अमेरिकी सरकारको निर्णयविरुद्ध युरोपेली युनियन आबद्ध अर्थमन्त्रीले अमेरिकाको कडा आलोचना गरेका छन् ।
अमेरिकी निर्णयको विरोध गर्दै एकतर्फी रूपमा कर लगाएमा आफ्ना सबै आर्थिक नियम तथा नीतिमा अमेरिकालाई एकल्याएर अघि बढ्ने भन्दै त्यसका लागि तयार रहन चेतावनी पनि दिएका छन् । आगामी शुक्रबारदेखि अमेरिकाको सो निर्णय कार्यान्वयनमा आउन लागेका बेला युरोपेली अर्थमन्त्रीको यो चेतावनी आएको हो । त्यसअघि जी–७ समूहका अर्थमन्त्रीले अमेरिकालाई दिएको यो चेतावनीलाई अर्थपूर्ण रूपमा लिइएको छ ।
सात युरोपेली राष्ट्रका अर्थमन्त्रीको क्यानडामा बसेको बैठकपछि उनीहरूले सो धारणा बाहिर ल्याएका हुन् । बैठकमा उनीहरूले अमेरिकासँग व्यापार युद्ध हुन सक्ने समेत उल्लेख गरेका छन् । क्यानडाको विस्ट्लरमा भएको बैठकमा युरोपेली युनियन आबद्ध देशका साथै क्यानडाले पनि यस्तो चेतावनी दिएको हो । उनीहरूले अमेरिकाको सो नियमको प्रतिकार गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उता, फ्रान्सका अर्थमन्त्रीले अमेरिकासँग आगामी केही दिनमै व्यापार युद्ध सुरु हुन सक्ने अवस्था रहेको बताए् ।
‘अमेरिकामाथि शोषण भएको छ’
उता, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले भने विगतका वर्षदेखि नै अरू देशले व्यापारका क्षेत्रमा अमेरिकामाथि नै शोषण गरिरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।